Izinto Ezibuhlungu Ziyenzeka—Ububi Neentlungu Zininzi!
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMoore IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo
Zininzi Izinto Ezibuhlungu!
USmita, * ibhinqa elineminyaka eyi-35 laseDhaka, eBangladesh, lalinobubele yaye libathanda abantu. Abantu babemazi njengenkosikazi ezimiseleyo neyonwabileyo eyayinceda abantu bafunde ngoThixo. Intsapho nabahlobo bothuka boma xa uSmita waqutyulwa sisigulo esambulala kungekapheli neveki enaso!
UJames nomfazi wakhe abakubudala obukwisithuba seminyaka eyi-30 nabo babenobuntu obufana nobukaSmita. Ngenye intwasahlobo bahamba bayokutyelela abahlobo babo kunxweme olukwiNtshona yaseUnited States. Abazange babuyele kwikhaya labo eliseNew York. Ngoxa babekwiholide njalo baba kwingozi yemoto eyababulalayo. Oko kwabangela intlungu engathethekiyo kubantu ababathandayo.
Kucacile ukuba izinto ezibuhlungu zehla ndawo yonke. Iimfazwe zibulala abantu namajoni. Abantu abangenatyala baba ngamaxhoba olwaphulo-mthetho nogonyamelo. Iingozi ezibulalayo nezigulo zenzeka kubo bonke abantu enokuba bangakanani ngeminyaka okanye banemali engakanani na. Iintlekele zemvelo zibulala abantu ngokungenalusini. Ucalucalulo nokungekho sikweni zigqugqisile. Mhlawumbi nawe ukhe walixhoba.
Kuqhelekile ukubuza imibuzo enjengale:
Kutheni izinto ezibuhlungu zisehlela abantu abalungileyo?
Ngaba sinokumbeka ityala uThixo ngazo?
Ngaba iintlekele ziyazenzekela okanye zenziwa ngabantu?
Ngaba zizinto abantu ababezenza kwixa elidluleyo ezi zibaphathela iintlungu?
Ukuba kukho uThixo onamandla, kutheni ke engabakhuseli abantu abalungileyo kwizinto ezibuhlungu?
Ngaba izinto ezibuhlungu nezimbi ziya kuze ziphele?
Ukuba sifuna ukuphendula le mibuzo kufuneka siqonde izinto ezimbini: Kutheni izinto ezibuhlungu zisenzeka yaye uThixo uza kwenza ntoni ngazo?